I-API ... Ngubani owakha i-APUI? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 28, 2006 NgoLwesine, ngoMashi 7, 2013 Douglas Karr
Sibe nezindawo zokusebenzelana zohlelo isikhathi eside embonini. Inselelo ye API ithola izinsiza zokuthuthuka ezidingekayo ukuhlela ukuhlanganiswa. Akulula. Usebenzisa noma yiluphi ulimi lwesimanje lohlelo, imvamisa uyadingeka ukuthi uthumele okuguquguqukayo kusevisi bese uthola imiphumela usebenzisa i-XML (Ulimi lwe-eXtensible Markup).
Ngo-2000, ngangisebenza eDatabase Marketing Consultancy eDenver, eColorado futhi sasinethuluzi elibizwa ngeSagent Solutions. USagent wagcina ethengwe ngu Iqembu1. Iqembu1 laziwa kakhulu esigcawini sokumaketha sedatha ngokwakha ezinye izinhlelo zokusebenza ezinhle. Angiqiniseki ukuthi kwenzekeni ngemikhiqizo yeSagent ebengiyisebenzisa, kepha bekumangalisa. Ohlangothini lwesobunxele kwesikrini sakho ubukade 'uguqula' futhi ungabadonsela ekuhambeni komsebenzi. Konke okufakwayo nemiphumela yokuguqulwa ngakunye kuzohlangana ngokuzenzakalela nokuguqukayo okulandelayo.
Ngakho-ke, ngingawakha ukuhamba komsebenzi wokungenisa ifayili, ngibalaze izinkambu zibe yi-database, ngiguqule amanani ezinkambu, ngihlanze amakheli, nginike amakheli i-geocode, ngithumele ifayili eligcwalisiwe, njll. Ngingahlukanisa nokuhamba komsebenzi futhi ngenze okuningi izinqubo ezinedatha efanayo. Ekubuyekezeni 'emuva-ekugcineni' kokuhamba komsebenzi, empeleni uSagent walugcina uhlelo esebenzisa i-XML. Lokho ngokuyisisekelo kusho ukuthi ungakha ngamandla futhi wenze ukuhamba komsebenzi uma ufuna. Isixazululo bekuyisixazululo samadijithi ayi-6, kepha ukwakha uhlelo lokusebenzisa indawo yokugcina imininingwane kuthathe imizuzu esikhundleni sezinsuku.
Ngokufika kwama-API, izinsiza zewebhu, insipho, i-Flex, i-Ajax, njll. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani kungekho muntu osazokwakha i-Web-based Application Programming User Interface. Ngamanye amagama, isikhombimsebenzisi sokuhudula bese uphonsa API izingcingo. Nge-SOAP, izinkampani zigcina i-WSDL (i-Web Service Definition Language) okuyiyona encyclopedia yohlelo yokuthi ungayisebenzisa kanjani insiza yewebhu. Eminyakeni emihlanu akekho noyedwa okwazile ukuthola isisombululo sokuhumusha i API noma i-Web Service yokwakha ukuhamba komsebenzi? Ngabe ukhona osebenza kulokho?
Nawu umbono wami ka- $ 1 Billion wosuku. Uma othile angakha isikhombimsebenzisi se-Flex esingafunda i-WSDL futhi simelele izingcingo ngokubukeka, ungahudula bese ulahla ukuxhumana phakathi kwamakholi. Yisixhumanisi esilahlekile sewebhu… okwenza iwebhu ifinyeleleke kunoma ngubani ukuze 'ahlele' isixazululo sabo ngaphandle kokuqonda noma yiziphi izilimi.
Tags: Apiisikhombi sokuhlela ukusebenzaapui